Da’yarta u dhimanaysa AIDS-ka oo tira badanaysa | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka November 30, 2015	0 251 Views
Muqdisho (Himilonews) – Tirada da’yarta u dhimanaysa AIDS-ka ayaa saddex jibbaarantay 15-kii sano ee ugu danbeeyey—halkaas oo badigood uu cudurku haleelay iyaga oo caruur ah, marka loo eego warbixin ay sii deysay UNICEF.
AIDS-ku waa tiro kamid ah cudurrada ay u dhintaan da’yarta u dhaxeysa 10—19sano iyo sabab dhimashada labaad ee da’yarta dunida, hey’adda QM u qaabilsan caruurta ayaa ku sheegtay shaxdii ugu danbeysay ee ay soo saartay.
“Bulshada uu saameeyey cudurka HIV-ga, da’yartu waa kooxda kaliya ee kororka dhimashadu uu laba kacay,” ayay tiri warbixintu.
“Badi da’yartu u dhimata AIDS-ka waxay cudurkan qaadaan xilliga caruurnimadooda. Halka haweenka uureysta ee qaba caabuqa HIV-ga ay ilmaha calooshooda ku jira u gudbiyaan cudurka.”
Badigood ayaa ku samata-baxa xilligooda da’yarnimada ogaal la’aan ah inay HIV xanbaarsan yihiin.
Si kastaba, da’yarta ku jirta heerka 15-19, 26-gale oo cusub ayay qaadaan saacad kasta, halka in-ku-dhow barka labada malyuun ee la nool HIV-ga oo da’yartan ku jirta ay ku nool yihiin lix dal: Koofur Africa, Neyjeeriya, Kenya, Hindiya, Mozambique iyo Tanzania.
“Gudaha dalalka saxaraha ka hooseeya, gabdhaha ayaa aad u qaada caabuqa HIV-ga halkaas oo 10-gale oo cusub ay qaadaan,” ayay tiri warbixintu.
Previous: Shanta meelood ee ugu xun ee Nairobi looga noolaado
Next: Muslimad lagu xabisay garoon diyaaradeed gudihiisa